Ikhaya > Imikhiqizo > Ukuqapha Kwegazi
(Yonke imikhiqizo engu-9 ye-Ukuqapha Kwegazi)
I-Ningbo Cland Medical Instruments Co., Ltd. ingenye yezinto ezine-Ukuqapha Kwegazi ezihola phambili e-China. Yimboni & umphakeli onguchwepheshe wokwenza Ukuqapha Kwegazi. Nikeza ikhwalithi ephezulu Ukuqapha Kwegazi ngentengo ephansi eshibhile.
Tag: Ukuthuthwa kwe-Transfusion kusethelwe i-Hypodermic , Ukuthuthwa kwegazi okulahlekile , Ukuguqulwa Kwegazi Okubekwe Nesinalutho
Ukuthuthwa Kwegazi Okulahlekile Okubekwe Nesinalutho Ye-Hypodermic Imininingwane: 1. Izinto: I-polypropylene ephezulu yezokwelapha ephezulu (Medical) 2. Isitifiketi: Isitifikedi Sokubhaliswa Kwemakhaya / EU CE, ISO Certification Izinzuzo zomkhiqizo:...
Tag: I-IV Isethelwe Ukumiswa Kwegazi , Ukwehliswa kwegazi okungenayo oyinyumba Okubekwa ngeSinal , Ukwehliswa kwegazi okungelaphekile kusetjenziswa ukuqoqwa kwegazi
I-Model No.: CL-AS0009
Tag: I-Medical Press Press Monitor , Isibhedlela se-Blood Pressure Monitor , I-Blood Pressure Monitor I-PALM TYPE
Igama lomkhiqizo: I-monitor ye-blood monitor I-PALM TYPE Item: CL-AS0009 Imininingwane: CL-AS0009A Uhlobo lwe-Palm nge-1-tube CL-AS0009B Uhlobo lwe-Palm nge-2-tube ABS plastic ipulazi, ububanzi be-65mm ububanzi be-Zinc_alloy obumnyama...
Ukuqapha Kwegazi ukuthengiswa okuvela ku-China, Ukuthengiswa Okuqondile kusuka kubakhiqizi beChina abaholayo emanani entengo eshibhile. Thola imikhiqizo engu-Ukuqapha Kwegazi eningi ku-Ningbo Cland Medical Instruments Co., Ltd. futhi uthole izinga eliphakeme le-Ukuqapha Kwegazi ngokuqondile kusuka ku-Ukuqapha Kwegazi abathengisa abathengi nabathengisi abathembekile. Thumela izidingo zakho zokuthenga & Thola impendulo ngokushesha.